March 2017 – Mecca Al -Mukarama Foundation
OLOLAHA LA DUUBO DADKAAGA OO KAALMO LOOGU FIDIYEY BARAKACAYAAL KU SUGAN DEGMADA KAXDA
Olalaha la duubo dadkaaga oo ah mid gurmad iyo gargaar loogu fidinayo dadka Soomaaliyeed oo ay saamaysay abaarta dalka ka jirto ayaa wejigiisii koowaad laga hirgeliyey degmada Kaxda ee Gobolka Banaadir oo ay soo gaareen barakacayaal cusub. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa degmada Kaxda iyo deegaannada la xiriira soo gaarayey dad fara badan oo ka yimid gobollada [...]
SALAAD ROOB DOON AH OO LAGA OOGAY DUGSIYADA MU’ASASADA MAKA AL-MUKARAMA
Maanta oo ay taariikhdu tahay 14/03/2017 waxaa salaad roob doon laga oogay lix dugsi oo hoos taga Mu'sasada Maka Al -Mukarama kuna yaalla Magaalada Muqdisho. Ka qayb galayaasha roob doonka oo isugu jiray mas'uuliyiinta Mu'asasada Maka Al- Mukarama, Maamulayaasha, barayaasha, ardayda iyo shaqaalaha dugsiyada ayaa waxaa wejiyadooda ka muuqday khusuuc iyagoo qaab wadareed eebbe [...]
DUGSIGA JAABIR BIN XAYAAN OO U SOO GUDBAY WAREEGGA KAMA DAMBAYSTA EE TARTANKA KUBBADDA CAGTA EE DUGSIYADA DEGMADA YAAQSHIID
Tartan Isboorti oo uu soo qabanqaabiyey guddiga Isboortiga ee degmada Yaaqshiid ayaa wejigiisii hore lagu soo gabagabeeyey garoonka Terry ee degmada Yaaqshiid. Tartanka oo ahaa mid Kubbadda Cagta ah ayaa u dhaxeeyey dugsiyada Sare ee ku yaalla Laanta Horseed ee degmada, kuwaas oo gaarayey dhawr iyo toban dugsi. Ciyaartii kama dambaysta waxaa isku haleelay dugsiyada [...]
Qaybta 2aad Waxa uu ciidankii duullaanka ahaaba jees kor fadhiyaanba markii uu gabbalku dhacay oo ay reerihii ku mashquulsanaayeen xoolo liskii ayey duullaan lixaad leh ku ugu soo dhaqaaqeen dhankii reeraha ay duullaanka ku ahaayeen, Abaanduulihii ciidanka oo ahaa nin dagaal, sooma jeeste garma qaate ah ayaa ciidanka hor socday, intii aan la gaarin goobtii [...]
Ma Ogtahay? Ma ogtahay in Kalluunku ku dhex noolaan karo biyaha hoostooda saacad isaga oo aan neefsan. Ma ogtahay in culayska Maroodigu gaarayo 5tan, xawaarihiisuna gaarayo 40km saacaddii. Ma ogtahay in xayawaanka Maroodigu murugtiisa ku muujiyo oohin, taasina uu kala mid yahay bini’aadamka. Ma ogtahay in Saxaabigii C/llaahi Bin Jaxshi (A.R) uu ahaa Amiirkii ugu horreeyey [...]